Nidaamka macluumaadka habka Quantum GIS (GIS)
Waa wax xiiso leh sida dadaallada isha Furan ee loo yaqaan 'Open Source' ay u maareeyeen inay naftooda ugu sii noolaadaan si deggan oo ay u siiyaan fursado ganacsi kuwa ku darsaday qiimaha inay wax ku darsadaan; iyada oo u oggolaanaysa u-gogol-xaarka meheradda iyada oo la ogyahay in shuruudaha ay dabooli doonaan khabiiro kale oo ganacsigooda ah. Moodooyinkaas ka mid ah, WordPress wuxuu mudan yahay qadarinteyda, ...
Dhammaan wararka ka imanaya QGIS
Kani waa maqaalka dib u eegista dhammaan wararka ka dhacay QGIS. Waqtigan la cusbooneysiiyay nooca 2.18. QGIS maanta waa mid ka mid ah waaya-aragnimada ugu weyn ee laga helo aaladda ilaha furan, oo leh karti ay kula tartami karto barnaamijyada macaamiisha qaab waara. [cinwaanka xiga = "QGIS 2.18 Las Palmas"] Wararka ...
3 ee isbadalada 27 ee QGIS 2.18
Markaan dhammeyno nolosha QGIS qaababka 2.x, waxaan sugeynaa waxa noqon doona QGIS 3.0, boggan wuxuu ina tusayaa waxa QGIS 2.18.11 'Las Palmas' ay ka mid tahay, kaasoo si rasmi ah loo sameeyay bishii Luulyo ee sannadkan. QGIS hadda waxay leedahay soo celin xiiso leh marka loo eego kafaala qaadayaasha cusub, shirkadaha rasmiga ah ee ...
QGIS 3.0 - Sidee, goorma iyo maxay; waxay tilmaamaysaa
Qaar badan oo naga mid ah ayaa isweydiinaya: Goorma ayaa la sii deynayaa QGIS 3.0? Sannadkii hore (2015) kooxda mashruuca waxay bilaabeen baaritaanka goorta iyo sida loo siidaayo QGIS 3.0. Waxay ballanqaadeen, sida ku xusan qoraal ay soo saartay Anita Graser, inay si cad ugu gudbin doonaan qorshayaashooda isticmaaleyaasha iyo horumariyeyaasha ka hor ...
Qgis - Baakadaha qaabeynta oo ku saleysan goob ka mid ah furaha 'cadastral key'
Dacwadda: Waxaan hayaa xirmooyin degmo, oo leh qaab-hawleed cadastral ah qaabkan soo socda: Waax, Degmo, Waax, hanti. sida magaca magacaabistu ka kooban tahay sida ka muuqata sawirka: Tusaale: 0313-0508-00059 Baahida Xaaladda ayaa ah inaan xiiseynayo inaan awood u yeesho in aan mowduucyo ka dhigto silsiladda labaad, oo ah ...
Qgis - Tusaalaha ku dhaqanka wanaagsan ee qaabka OpenSource
Mar kasta oo aan hor fariisanno shirkad ama hay'ad dooneysa inay hirgeliso barxad leh qaab maamul dhuleed, oo caadeysata inay maqasho codad badan oo diidmo ah oo ku saabsan moodooyinka OpenSource, su'aashan waxay la timid kala duwanaansho yar. Ayaa u qalma QGIS? Waxay noo muuqataa masuuliyad iyo wax caadi ah, in go'aan qaade uu doonayo inuu taageero ...
Qaddarka xogta ku jirta OpenStreetMap runti waa weyn tahay, in kasta oo aan si buuxda loo cusbooneysiin, xaaladaha badankood way ka saxsan tahay xogta dhaqan ahaan lagu soo ururiyo ee loo maro xaashiyaha sawir gacmeedka oo leh cabir dhan 1: 50,000. QGIS waa wax weyn in lagu rakibo lakabkan khariidad asal ah sida sawirka Google ...